Fitsipika fototra momba ny fanompoana - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Fitsipika fototra amin'ny fanompoam-pivavahana
Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoana azy isika satria mamaly azy araka ny mety. Mendrika ny hoderaina izy tsy noho ny heriny fotsiny fa noho ny hatsaram-panahiny ihany koa. Andriamanitra dia fitiavana ary ny zavatra rehetra ataony dia avy amin'ny fitiavana. Mendrika hoderaina izany. Midera ny fitiavan'olombelona mihitsy aza isika! Midera ny olona manolo-tena amin'ny fanampiana ny hafa izahay. Tsy nanana tanjaka ampy hanavotana ny tenanao ianao, fa ampiasainao hanampiana ny hafa - mendri-piderana izany. Mifanohitra amin'izany kosa, mitsikera ny olona manana fahaizana manampy ny hafa izahay nefa tsy nety nanao izany. Ny hatsaram-panahy dia mendrika dera bebe kokoa noho ny fahefana. Andriamanitra dia samy manana satria tsara fanahy sy mahery izy.
Ny fiderana dia manalalaka ny fatoram-pitiavana eo amintsika sy Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy ho levona na oviana na oviana, kanefa ny fitiavantsika azy matetika dia mihamalemy. Ho fiderana dia avelantsika hiroborobo ny fitiavany antsika ary mampirehitra ny afom-pitiavana azy izay napetraky ny Fanahy Masina ao amintsika. Tsara ny mitadidy sy mamerimberina ny maha-Andriamanitra antsika, satria manatanjaka antsika ao amin’i Kristy izany ary mampitombo ny faniriantsika ho tonga tahaka azy amin'ny hatsaram-panahy, izay mampitombo ny fifaliantsika koa.
Natao hanambara ny fitahian'Andriamanitra isika (1. Petrus 2,9) mba hidera sy hanomezam-boninahitra azy - ary arakaraka ny hanaiky ny fikasan’Andriamanitra momba ny fiainantsika no hitomboan’ny fifaliantsika. Mahafa-po kokoa ny fiainana rehefa manao izay nahariana antsika isika: manome voninahitra an’Andriamanitra. Tsy amin’ny fanompoam-pivavahana ataontsika ihany no anaovantsika izany, fa amin’ny fomba fiainantsika koa.
Ny fomba fiainana ivavahana
Fomba fiaina ny fanompoana an’Andriamanitra. Atolotsika ho sorona ny vatantsika sy ny saintsika (Romana 12,1-2). Manompo an’Andriamanitra amin’ny fitoriana ny filazantsara isika (Romana 1 Kor5,16). Manompo an’Andriamanitra isika rehefa manome fanomezana (Filipiana 4,18). Manompo an’Andriamanitra isika rehefa manampy olona (Hebreo 13,16). Ambaranay fa mendrika ny fotoanantsika sy ny fiheverantsika ary ny tsy fivadihantsika izy. Midera ny voninahiny sy ny fanetren-tenany isika noho ny nahatongavany ho iray amintsika. Midera ny fahamarinany sy ny famindram-pony isika. Midera azy isika fa izy no maha izy azy.
Satria natao mba hanambarana ny voninahiny isika. Mety ny midera an'Ilay nahary antsika, izay maty sy nitsangana mba hamonjy antsika sy hanome fiainana mandrakizay, izay miasa ankehitriny izy hanampy antsika hitovy Aminy. Izahay dia manome azy ny tsy fivadihana sy ny fitiavantsika.
Natao hidera an’Andriamanitra isika, ary hanao izany mandrakariva. Nahazo fahitana momba ny hoavintsika ny apostoly Jaona: “Ary ny zava-boary rehetra izay any an-danitra sy etỳ an-tany sy ambanin’ny tany sy izay any an-dranomasina mbamin’izay rehetra ao aminy dia reko hoe: Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho amin’ny Zanak’ondry anie ho amin’ny seza fiandrianana. fiderana sy haja sy dera ary hery mandrakizay mandrakizay! (Epifania 5,13). Izao no valiny mety: hajaina izay tokony hohajaina, haja ho an’izay tokony homem-boninahitra, ary tsy fivadihana amin’izay tokony hohajaina.
Fitsipika fototra dimy
Salamo 33,13 mampirisika antsika hoe: “Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina; aoka ny mahitsy hidera Azy. Miderà an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha tory folo. Mihirà fihiram-baovao ho Azy; milalao tsara amin'ny tady miaraka amin'ny feo falifaly!" Ny Soratra Masina dia mampianatra antsika hihira sy hihoby amin’ny fifaliana, hampiasa harpa, sodina, ampongatapaka, trompetra ary kipantsona – na dia handihy hiankohoka eo anatrehany aza ( Salamo 149-150 ). Ny sary dia iray amin'ny firavoravoana, ny hafaliana sy ny fahasambarana tsy hay tohaina, izay aseho tsy misy fepetra.
Ny Baiboly dia mampiseho amintsika ny fanompoam-pivavahana mivantana. Hita ao koa ny ohatry ny fotoam-pivavahana amin'ny fomba ofisialy, ary ny fomba efa natsangana tsara nandritra ny taonjato maro. Ireo endrika fivavahana roa ireo dia azo hamarinina; tsy misy afaka mitonona ho hany tokana marina hiderana an'Andriamanitra. Tiako ny hamaritra ny sasany amin'ireo fitsipika fototra izay manan-danja amin'ny fanompoana amin'ny fanompoana.
1. Antsoina hivavaka isika
Tian’Andriamanitra hanompo azy isika. Izany dia tsy tapaka izay azontsika vakina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny Baiboly (1. Mosesy 4,4; John 4,23; Apokalypsy 22,9). Ny fanompoam-pivavahana amin’Andriamanitra dia iray amin’ireo antony niantsoana antsika: hitory ny voninahiny [ny fankasitrahany] (1. Petrus 2,9). Tsy hoe tia sy mankatò Azy fotsiny ny vahoakan’Andriamanitra, fa manao fanompoam-pivavahana koa. Manao sorona izy, mihira fiderana, mivavaka.
Mahita fomba isan-karazany azo anaovana fanompoam-pivavahana ao amin’ny Baiboly isika. Tsipiriany maro no voalaza ao amin’ny lalàn’i Mosesy. Ny olona sasany dia nankinina hanao hetsika voatondro amin'ny fotoana sy toerana sasany. Mifanohitra amin'izany kosa no hitantsika ao amin'ny 1. Ny Bokin’i Mosesy dia nampianatra fa ireo patriarka dia manana fitsipika vitsivitsy tokony hotadidina ao amin’ny fanompoam-pivavahany. Tsy nanana fisoronana voatendry izy ireo, teo an-toerana, ary tsy nanana toromarika firy momba ny inona sy ny fotoana tokony hanaovana sorona.
Ny Testamenta Vaovao koa dia tsy mifanakalo antsipirihany momba ny fomba sy rahoviana ny hivavaka. Ny zavatra atao amin'ny fanompoana dia tsy voafetra ho vondron'olona manokana na toerana manokana. Kristy dia nofoanana ny fepetra takin'i Mosesy. Ny mpino rehetra dia mpisorona ary manolotra ny tenany ho sorona velona.
2. Andriamanitra irery ihany no avela hivavahana
Na dia misy karazany maro aza ny karazana fanompoam-pivavahana, dia mahita tsy tapaka tsotra isika izay mandeha amin'ny soratra rehetra: Andriamanitra irery no tokony hotompoina. Azo ekena fotsiny ny fiankohofana raha tsy izy io. Andriamanitra dia mitaky ny fitiavantsika rehetra - ny fahatokisantsika rehetra. Tsy afaka manompo andriamanitra roa isika. Na dia afaka manompo azy amin'ny fomba samihafa aza isika, ny firaisan-tsaintsika dia miankina amin'ny hoe izy no ivavahantsika.
Tany amin'ny Isiraely fahiny, Bala, andriamanitra kananita, dia matetika dia ivavahana amin'ny fifaninanana amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Jesosy dia fomban-drazana, ny fahamarinana ary ny fihatsarambelatsihy. Izay rehetra mampisaraka antsika sy Andriamanitra - izay rehetra manakana antsika tsy hankatò azy - dia andriamanitra sandoka, sampy. Ho an'ny sasany dia vola izy io; ho an'ny sasany dia firaisana ara-nofo. Ny sasany dia manana olana lehibe amin'ny fireharehana na fiahiahiana ny lazany amin'ny hafa. Ny apostoly Jaona dia nitantara ny sasany tamin'ireo andriamanitra sandoka iraisana amin'ny iray amin'ireo taratasiny:
Aza tia izao tontolo izao! Aza ahantona amin'izay an'izao tontolo izao ny fonao! Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy manana toerana eo amin’ny fiainany ny fitiavana ny Rainy. Satria tsy misy na inona na inona mampiavaka an’izao tontolo izao avy amin’ny Ray. Na ny fitiavan-tenan’ilay olona tia tena, na ny fijeriny feno fitsiriritana, na ny fieboeboana sy ny fananany, dia samy manana ny fiaviany eto amin’ity tontolo ity izany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany; fa izay manao araka ny sitrapon'Andriamanitra no ho velona mandrakizay. (1. Johannes 2,15-17 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Tsy maninona izay malemy no tokony hataontsika, mila manomboana azy isika, mamono azy, manala ireo andriamani-diso rehetra. Raha misy manakana antsika tsy hankatò an'Andriamanitra dia tokony hesorina isika. Tian'Andriamanitra ny olona izay miankohoka eo anatrehany, izay manana azy ho ivon'ny fiainany.
Ny fahatelo tsy tapaka momba ny fanompoam-pivavahana asehon'ny Baiboly antsika dia ny hoe ny fivavahantsika dia tokony atao amin'ny fo. Tsy misy dikany izany raha ataontsika fotsiny noho ny endrika, mihira ny hira mahitsy, manangona amin'ny andro marina, ary milaza ny teny mety, fa aza tia an'Andriamanitra amin'ny fo. I Jesosy dia nanakiana an'ireo izay nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny molony, fa tsy very maina ny ivavahan'izy ireo satria lavitra an'Andriamanitra ny fony. Ny lovantsofin'izy ireo, tany am-boalohany dia nikasa haneho fitiavana sy fiankohofana, no nanaporofo fa sakana amin'ny fitiavana sy ny fanompoana marina.
Nohamafisin’i Jesosy koa fa ilaina ny fahatsoram-po rehefa nilaza izy fa tsy maintsy ivavahana amin’ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra (Jaona. 4,24). Raha milaza ho tia an’Andriamanitra isika nefa mandà ny didiny, dia mpihatsaravelatsihy. Raha sarobidy amintsika noho ny fahefany ny fahafahantsika, dia tsy afaka manompo azy marina isika. Tsy afaka mandray ny fanekeny eo am-bavantsika sy manipy ny teniny ao ivohontsika isika ( Salamo 50,16:17 ). Tsy afaka miantso azy hoe Tompo isika ary tsy miraharaha ny toromarika omeny.
Miharihary ao amin’ny Baiboly fa miaraka ny fivavahana marina sy ny fankatoavana. Marina indrindra izany raha ny amin’ny fomba itondrantsika ny hafa ny Tenin’Andriamanitra. Tsy afaka manome voninahitra an’Andriamanitra isika raha manao tsinontsinona ny zanany. «Raha misy manao hoe: Tia an’Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany dia tsy afaka ny ho tia an’Andriamanitra izay tsy hitany.»1. Johannes 4,20-21). Manoritsoritra toe-javatra mitovy amin’izany i Isaia amin’ny fanakianana manindrona ny olona izay mitandrina ny fombafombam-pivavahana nefa manao ny tsy rariny ara-tsosialy:
Aza manao fanatitra hohanina foana toy izany intsony; Halako emboka manitra! Ny voaloham-bolana sy ny sabata, raha miangona ianareo, dia tsy tiako ny fanaratsiana sy ny fivoriam-be! Ny fanahiko dia fahavalon'ny voaloham-bolanareo sy ny firavoravoanareo isan-taona; enta-mavesatra amiko ireny ka sasatra ny mitondra azy aho. Ary na manatsotra ny tananareo aza ianareo, dia hafeniko aminareo ny masoko; ary na dia mivavaka mafy aza ianareo, dia tsy mihaino anareo Aho (Isaia 1,11-15).
Raha ny fahitantsika azy dia tsy misy maharatsy ny andro nitandreman’ny olona na ny karazana emboka manitra na ny biby natao sorona. Ny fomba fiainan'izy ireo nandritra ny fotoana sisa no olana. Feno rà ny tananao! hoy izy (andininy 15) - ary tsy ny tena mpamono olona ihany no olana.
Nitaky vahaolana feno izy: «Avelao ny ratsy! Mianara hanao ny tsara, mitandrema amin'ny rariny, ampio ny ampahorina, manaova fitsarana ho an'ny kamboty, tariho ny adin'ny mpitondratena!" ( Andininy faha-16-17 ). Tsy maintsy nandamina ny fifandraisan’izy ireo izy ireo. Tsy maintsy nandao ny fitsarana an-tendrony fanavakavaham-bolon-koditra izy ireo, ny fomba fijery ara-tsosialy ary ny fomba ara-toekarena tsy ara-drariny.
5. Misy fiantraikany amin'ny fiainana rehetra izany
Ny fiankohofana dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fomba itondrantsika azy fito andro isan-kerinandro. Hitantsika ao amin'ny Baiboly izany fitsipika izany. Ahoana no tokony hivavahantsika? Nametraka io fanontaniana io i Mika mpaminany ary nanoratra ihany koa ny valiny:
Ahoana no hanatonako an'i Jehovah sy hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra Avo indrindra? Tokony hanatona azy ve aho hitondra fanatitra dorana sy ombilahy kely iray taona? Moa ho sitrak'i Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo sy ny ony diloilo tsy hita isa? Hanolotra ny lahimatoa va aho noho ny fahadisoako, ny ateraky ny kiboko noho ny fahotako? Ralehilahy, efa nambara taminao izay tsara sy izay angatahin’i Jehovah aminao, dia ny fitandremana ny tenin’Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny fanetren-tena eo anatrehan’Andriamanitrao (Mika). 6,6- iray).
Nohamafisin’i Hosea mpaminany koa fa zava-dehibe kokoa noho ny rafitry ny fanompoam-pivavahana ny fifandraisana: “Ny fitiavana no ankafiziko, fa tsy ny fanatitra, ny fahalalana an’Andriamanitra, fa tsy ny fanatitra dorana.” ( Hosea. 6,6). Ankoatra ny fiderana an’Andriamanitra dia voantso hanao asa tsara isika (Efesiana 2,10). Ny hevitsika momba ny fanompoam-pivavahana dia tsy maintsy mihoatra lavitra noho ny mozika, ny andro ary ny fombafomba. Tsy zava-dehibe toy ny fomba itondrantsika ny olon-tiantsika ireo tsipiriany ireo. Fihatsarambelatsihy ny miantso an’i Jesoa ho Tompontsika raha tsy mikatsaka ny fahamarinany sy ny famindram-pony ary ny famindrampony isika.
Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra lavitra amin'ny hetsika ivelany - tafiditra ao anatin'ny fiovana amin'ny fitondran-tena izany, izay avy amin'ny fiovan'ny toe-tsaina izay entin'ny Fanahy Masina ao amintsika. Fanapahan-kevitra lehibe amin'ity fanovana ity ny fahavononantsika handany fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka, ny fandalinana, ary ny fika ara-panahy hafa. Io fanovana fototra io dia tsy mahagaga, noho ny fotoana lanintsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
Nanitatra ny fomba fijery momba ny fanompoana i Paoly
Ny fanompoam-pivavahana dia mahafaoka ny fiainantsika rehetra. Mamaky izany isika ao amin’ny taratasin’i Paoly. Mampiasa ny teny hoe sorona sy fanompoam-pivavahana (fiankohofana) toy izao izy: “Ary ankehitriny, ry rahalahy malala, mananatra anareo aho, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra. Aoka izany ho fanompoam-pivavahana araka ny antonony » (Romana 12,1). Ny fiainantsika manontolo no tiantsika ho fanompoam-pivavahana, fa tsy adiny vitsivitsy isan-kerinandro. Raha atokana ho amin’ny fanompoam-pivavahana ny fiainantsika manontolo, dia azo antoka fa hisy fotoana iarahana amin’ny Kristianina hafa isan-kerinandro!
Mampiasa fehezanteny hafa momba ny sorona sy fanompoam-pivavahana i Paoly ao amin’ny Romana 15,16. Ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy ho mpanompon’i Kristy Jesosy teo amin’ny jentilisa no resahiny, dia ilay mpisorona mitantana ny filazantsaran’Andriamanitra mba ho tonga sorona ankasitrahan’Andriamanitra ny Jentilisa, izay nohamasinin’ny Fanahy Masina. Ny fitoriana ny filazantsara dia endrika fanompoam-pivavahana sy fanompoam-pivavahana.
Koa satria isika rehetra dia mpisorona, dia adidin'ny mpisorona ny manambara ny soa sy ny voninahitr'izay niantso antsika (1. Petrus 2,9) - asa fanompoam-pivavahana izay azon’ny mpino atao na andraisan’ny tsirairay anjara amin’ny fanampiana ny hafa hitory ny filazantsara. Rehefa nisaotra ny Filipianina noho ny fanampiana ara-bola i Paoly, dia nampiasa teny fanompoam-pivavahana toy izao izy: “Izaho no nahazoako tamin’ny alalan’i Epafrodito izay avy taminareo, dia hanitra ankasitrahana, fanatitra mahafinaritra, sitrak’Andriamanitra.” (Filipianina) 4,18).
Ny fanampiana mba hanampiana ny Kristianina hafa ara-bola dia mety ho karazana fanompoam-pivavahana sasany. Ny fanompoam-pivavahana dia resahina ao amin’ny Hebreo ho toy ny zavatra miseho amin’ny teny sy ny atao: “Koa aoka isika hidera an’Andriamanitra mandrakariva amin’ny alalany, dia ny vokatry ny molotra izay manonona ny anarany. Aza adino ny manao soa sy mizara izany amin’ny hafa; fa fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra » (Hebreo 13,15- iray).
Antsoina isika hivavaka, hankalaza ary hivavaka amin'Andriamanitra. Faly anay ny mizara manambara ny soa azony - ny vaovao mahafaly izay nataony ho antsika ao amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy.
Fahamarinana dimy momba ny fanompoam-pivavahana
Tian'Andriamanitra hivavaka aminy isika sy hidera sy hisaotra azy.
Andriamanitra irery ihany no mendrika hotompointsika ary tsy hivadika mihitsy.
Tokony hivavaka amin'ny fo ny fivavahana fa tsy fampisehoana.
Raha mivavaka sy tia an'Andriamanitra isika dia hanao izay lazainy.
Tsy zavatra ataontsika isan-kerinandro ny fanompoana dia tafiditra ao anatin'izay rehetra ataontsika.
Inona no tokony hoeritreretina
Inona no toetran'Andriamanitra ankasitrahanao indrindra?
Ny sasany tamin'ireo iharan'ny Testamenta Taloha dia may tanteraka - ny sisa tavela dia setroka sy lavenona. Moa ve ny iray amin'ireo olona niharan-doza nataonao?
Mpifaly mifaly rehefa mahita tanjona ny ekipa na mandresy lalao. Mankasitraka an'Andriamanitra ve isika?
Ho an'ny olona maro, dia tsy tena zava-dehibe amin'ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Inona kosa no tian'ireo olona?
Nahoana Andriamanitra no miahy ny fomba itondrantsika olon-kafa?